थाहा खबर: माधवलाई शंकरको प्रश्‍न : प्रचण्डसँगको सहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो भने पार्टीविरुद्ध घात भएन र?
शान्ति प्रकृयाका लागि वार्ता गर्नु र निरन्तर सहकार्य गर्नु फरक कुरा भएको जिकिर
'माधव कमरेड तपाईंले जारी गरेको निर्देशनअनुसार तत्कालीन माओवादी उग्रवामपन्‍थको राजनीतिक विरोध र प्रतिवादगर्दा कमरेड यदु गौतमलगायत तत्कालिक एमालेका झण्डै ५०० कार्यकर्ताले जीवन वलिदान गर्नुभएको थियो' उनले लेखेका छन्, 'तर आज तपाईं कमरेड प्रचण्डसँग सुरुदेखि नै सहकार्यमा रहेको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ।'
शान्ति प्रकृयामा ल्याउन वार्ता गर्नु र निरन्तर सहकार्य गर्नु फरक कुरा भएको उनले तर्क गरेका छन्। 'शान्ति प्रकृयामा ल्याउन वार्ता गर्नु र निरन्तर सहकार्य गर्नु फरक होला नि कमरेड। त्यतिबेला साच्चै माओवादी नेता प्रचण्डसँगको सहकार्य रहनु भएको हो भने त्यो पार्टी विरुद्धको घात भएन र कमरेड?' उनले भनेका छन्।
'शान्ति प्रकृयामा प्रवेशपछि त हामी सबै सहकार्यमा होइन एकतामा नै बाँधिएका हौँ। त्योभन्दा पहिले लामो समयसम्म तपाईंकै नेतृत्वमा माओवादी उग्रवामपंथ विरुद्ध वैचाारिक तथा राजनीतिक संघर्षमा रहेको कुरा सत्य होइन र?' उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, 'यति छिटै इतिहासको कटु सत्यलाई कसरी बिर्सन मिल्छ र?'
कमरेड माधव नेपालको प्रचण्डसंग सुरुदेखि सहकार्य रहेको दावी वारे माधव कमरेड तपाईले जारी गरेको निर्देशन अनुसार तात्कालिक...
Posted by Shankar Pokhrel on Saturday, January 16, 2021